Qaraxyo ay Ku Dhinteen 156-ruux oo Ka Dhacay Dalka Sri Lanka+Sawirro – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Qaraxyo ay Ku Dhinteen 156-ruux oo Ka Dhacay Dalka Sri Lanka+Sawirro
Qaraxyo xiriir ah ayaa lala beegsaday kaniisado iyo hoteelo ah kuwa lagu nasto oo ku yaallo dalka Sri Lanka, ugu yaraan 156 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaas ku dhawaad 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxa ayna dadkaasi badankood ahaayeen kuwa ku cibaadeysanaya kaniisadaha la weeraray maanta oo axad ah.
Qaraxyadan ayaa gaarayey ilaa iyo lix qarax, Seddex kamid ah qaraxyada waxa ay ka dhaceen kaniisado Catholic ah, halka seddexda qarax ee kale lala beegsaday hoteelo lagu nasto oo ku yaallo bartamaha magalada Colombo.
Qaraxa koowaad waxa lasoo warinayaa inuu ka dhacay kaniisad ku taallo magaalada caasimadda ah, qaraxyada kale isaga ayey daba socdeen waxa ayna dhamaantood qaraxyadu ku dhaceen muddo aan ka badneen 30 daqiiqo.
Majirto ilaa iyo hadda cid si cad u sheegatay mas’uuliyadda qaraxyadaan.
Mid kamid ah kaniisadaha la beegsaday waxa ay ku talla magaalada Colombo, labada kaniisad ee kale waxa ay ku yaallaan magaalooyinka Negombo oo 30km u jirto caasimadda iyo Batticaloa oo 250 km u jirta magaalada caasimadda ah ee Colombo.
Sida ay baahisay wakaaladda waraja ee Reuters Gudaha kaniisadahan waxaa lagu dilay tiro dad ah, mid kamid ah kaniisadaha sawiro lagu soo daabacay bogeeda facebook waxaa ka muuqanayey dhiig badan oo dhulka qulqulayo waxa ayna caawinaad kaga dalbadeen dowladda.
Sarkaal caafimaad oo ka tirsan Batticaloa hospital ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in lasoo gaarsiiyey in ka badan 400 oo ruux oo dhaawacyo qabo kadib markii ay qaraxyadu dhaceen.
Afhayeen u hadlay ciidamada police-ka dalka Sri Lanka oo lagu magacaabo Ruwan Gunasekera ayaa sheegay in la daad gureeyey dadkii ay dhaawacyada kasoo gaareen qaraxyadii lixda ahaa ee maanta lagu weeraray kaniisadaha iyo hoteelada, waxa uuna intas sii raaciyey in ciidamada ammaanku ay xireen goobihii ay weeraradu ka dhaceen si baaritaano looga sameeyo.